बस दुर्घटना हुँदा ३३ जना घाइते » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बस दुर्घटना हुँदा ३३ जना घाइते
सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८ मा प्रकाशित !
२८ चैत​, बर्दिया। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्र्तगत बर्दियाको ठाकुरवावा नगरपालिका वाडनम्वर १ स्थित भुरिगाउँमा बस दुर्घटना ३३ जना यात्रु घाइते भएका छन । दार्चुलाबाट काठमांडौ जाँदै गरेको ना ६ ख १२२७ नम्वरको वस एक्कासी सडकमा पल्टिँदा आजराती र्दुघटना भएको हो ।
गुडिरहेको मोटरसाइकललाई जोगाउन खोज्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले डढेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्वर २ बस्ने बर्ष २८ का बसका चालक टेक बहादुर कडायतलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
दुुुर्घटनामा परी १६ जना यात्रुको टाउकोमा चोटलागेको र १७ जना यात्रुको ढाड, हात, खुट्टामा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको स्थानीय केपी क्लिनिक भुरिगाउँमा उपचार पश्चात थप उपचारको लागि मेडिकल कलेज कोहलपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरिक्षक भरत बहादुर बोहोराले बताए ।
बैतडीका जनक नाथ, पदम सिंह धामी, तिलक भट्ट, गणेश विष्ट, कृष्ण बहादुर चन्द र पुष्कर चन्द दार्चुलाका प्रदीप वस्याल, दिपक भट्ट, संगिता डोवाल र धन बहादुर विष्ट, जुम्लाका कृष्ण धरल र जय बहादुर रोकाया, कैलालीका पवित्रा पाण्डे र निर्मला संग्रौला तथा कञ्चनपुर निवासी मञ्जु नाथलाई टाउकोमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: सङ्घीय प्रणालीमा दोहोरो कर नलाग्ने – प्रधानमन्त्री दाहाल
NEXT POST Next post: ९ वर्षदेखि गोठमा बास
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, चैत्र २८, २०७३ ०८:०८